Gbaa mmadu niile ume ka ha sonye na e-commerce | ECommerce ozi ọma
El azụmahịa igwe doro anya bụ otu n'ime ụzọ kachasị mma iji nweta usoro nke ngwaahịa n'ihi ihe niile uru na akụrụngwa na nyiwe ndị a na-enye, mana n'agbanyeghị uru niile enwere ike depụtara maka ndị nwe ihe ndị a ụlọ ahịa mebere.
E nwere ụfọdụ akụkụ nke ahịa ahụ ka na-ekpo ọkụ ịnakwere ime mebere zụta; na ezi ihe kpatara ya, n'ihi na ha na-atụ egwu na ngwaahịa ahụ abụghị ihe ha chọrọ, ma ọ bụ na ha na-atụkwa ụjọ na azụmahịa na-akwadoghị ga-eme; Ndị na-ege ntị a bụ ndị kacha ochie, mana enwere ụfọdụ ihe anyị nwere ike ime ka ha mata ka ha wee nwee ike ntụkwasị obi ma sonye na azụmahịa e-commerce.
Otu uru ga-akacha adọta mmasị ndị agadi bụ na na azụmahịa igwe Ọ dịghị mkpa ịme ogologo ahịrị iji kwụọ ma ọ bụ nata ngwaahịa a, na nke a onye ahịa ga-echere naanị site na nkasi obi nke ụlọ ya. Maka mmetụta ka ukwuu, a pụrụ ịkpọtụ aha niile uru na oge na nke a gụnyere, na ọ bụrụ na enwere nkwarụ, ọrụ ndị ahịa na-aga n'ihu na-abụ otu ogo, ma ọ bụ karịa, karịa nke ụlọ ahịa anụ ahụ.
Ihe ọzọ nwere ike ime ka ọha mmadụ kwenye ịbanye n'ụwa azụmahịa igwe bụ na njikwa ego adịghịzi mkpa, yabụ ị gaghị etinye ndụ na ebughi ya ego zuru ezu inwe ike ịzụta ngwaahịa; mana site na ngwa ngwa ị nwere ike ịzụta. Ugbu a, n'okwu a ọ dị ezigbo mkpa ka anyị kwuo maka nke anyị nchekwa nche iji mee ka nkwa nke ozi nke data nkeonwe na nke ego nke ndị ahịa anyị; ọ bụ n'ezie ezigbo ohere.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ka anyị gbaa mmadụ niile ume ka ha sonyere e-commerce
Ecommerce Social na usoro 3